Sawir muujinaya askar cadaan ah oo fardo saaran xarig ku hogaaminaya nin madow oo baraha… – Hagaag.com
4 Juunyo 2020 in English // Russia sends second batch of fighter jets to Syria: embassy
4 Juunyo 2020 in English // UN moves toward ending UN-AU peacekeeping in Sudan’s Darfur…
4 Juunyo 2020 in National // Maxkamada Gobolka Bari ayaa ku riday xukun dil ah haweeney lagu eedeeyey in ay xaday…
4 Juunyo 2020 in National // Faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal saakay ka dhacay degmada Balcad ee Gobolka…
4 Juunyo 2020 in English // US holds up UN envoy on Libya, frustrating Europeans…
Sawir muujinaya askar cadaan ah oo fardo saaran xarig ku hogaaminaya nin madow oo baraha…
Posted on 7 Agoosto 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Taliska ciidanka booliska ee gobolka Texas ayaa raalligalin bixiyay, ka dib markii la shaaciyay sawir muujinaya 2 askari oo caddaan ah oo iyagoo fardo saaran xarig ku hoggaaminaya nin madow ah oo jeebeysan.
Dhacdadan ayaa caro weyn ka abuurtay baraha xiriirka bulshada iyo bogagga internet-ka.
Taliyaha booliska magaalada Galveston Vernon Hale ayaa Isniintii sheegay in arrinta dhacday ay tahay wax aan la aqbali karin, balse “ciidanku ay go’aan aan habbooneyn qaateen xilligaas”.
Sarkaalkan ayaa sheegay in dhacdadaas “aan loola jeedin fal wuxuushnimo ah”, isla markaana uu baddalay dhammaan askartii aaggaas ka howlgaleysay, si looga hortago inuu falkaas dib usoo laabto.
Dad badan oo isticmaala baraha xiriirka bulshada ayaa sheegay in sawirkaas uu dib u xusuusinayo nidaamkii addoonsiga ee waa hore jiray.
War saxaafadeed ay soo saareen madaxda ciidanka booliska ee magaalada Galveston ayaa lagu sheegay in labada askari oo lagu kala magacaabo P Brosch iyo A Smith ay Donald Neely u xireen fal dambiyeed uu sameeyay.
Mr. Neely ayaa loo kaxeeyay xarun ay leeyihiin booliska.
Saraakiisha ayaa caddeeyay in xariga lagu hoggaaminayay uusan gacmaha uga xirneyn “balse uu ku xiriirsanaa jeebbada birta ah ee gacmaha looga qufulay”.
Bayaanka ayaa intaas ku daray : “Waan fahansan nahay wajiga xun ee dhacdadan laga arkayay waxaana aaminsan nahay in tallaabada aan qaadnay ay tahay sida ugu habboon ee falka noocaas ah loo cirib tiri karo”.
“Ugu horreyn waa inaan Neely ka raalligaliyo falka ceebta ah ee lagula kacay”, ayuu Mr Hale ku yiri bayaankiisa.
Wuxuu sidoo kale garwaaqsaday in askarta looga baahnaa “inay sugaan gaadiid ay eedeysanaha uga kaxeeyaan goobtii lagu xiray”.
“Waxaan si deg deg ah u baddalnay nidaamka, si aan uga hortagno ficillada noocan ah, dib ayaana u eegi doonnaa habka tababarka iyo shaqadaba”, ayuu yiri taliyaha.
Mr Neely ayaa hadda bannaanka ku jooga damiin balse suurtagal ma aha in wareysi lala yeesho, sida uu tabiyay wargeyska Houston Chronicle.
Leon Phillips, oo ah agaasimaha waaxda caddaaladda ee ismaamulka Galveston, ayaa BBC-da u sheegay in sawirka ku faafay baraha bulshada uu qaaday qof shacab ah oo ka gaabsaday in la magacaabo.
Mr Phillips ayaa sheegay “inay adagtahay in laga hadlo dhacdadaas”, ayna tahay wax laga yaxyaxo.
“Kani wuxuu ahaa khalad nacasnimo ah”, ayuu yiri, wuxuuna intaas ku daray: “Waxa aan ogahay waa in haddii uu ninkaas caddaan ahaan lahaa aysan sidaas ula dhaqmi lahayn”.
About Admin (10232 Articles)
UN moves toward ending UN-AU peacekeeping in Sudan’s Darfur…
US holds up UN envoy on Libya, frustrating Europeans…
Kooxda Liverpool ayaa muujisay sida ay uga xun tahay dilka naxariis darada loo geystay…
Feeryahanka Mareykanka Floyd Mayweather oo ballan qaaday bixinta qarashka duugta George…
Xiddiga reer Algeria Riyad Mehrez oo laga dhacay gurigiisa alaabooyin lagu qiimeeyey qiyaastii…
Jilaa caan ah oo naxariis u muujiyey cunug yar oo isku dayay inuu kiciyo hooyadiisa dhimatay…
Nin Danish ah oo deriskiisa dhibaato ku qabay oo sariirtiisa soo dhigtay wadada caro…
Bilyaneerka reer Syria Rami Makhlouf oo si ku meel gaar ah loo hakiyey in uu safro…
Shirkadda Facebook oo ku dhawaaqday 20kii xubnood ee ugu horeeyey ee guddiga la socodka…
Google oo soo saartay App-ka la yiraahdo Meet ee ku sheekeysiga fiidiyowga boqol qof hal mar…
UK made a firm decision on Huawei in 5G: foreign ministry’s top official…